Shiinaha B008 beerta cadceedda light_9.7V soosaarayaasha baytariyada lithium | Hangchi
Xeedho Ac / DC
Iftiin gidaarka qoraxda
Solar Inverter (off grid) xakamaynta MPPT
Qeexida 1000 Lumens
Qeexitaanka 2000 Lumens
Faahfaahinta iftiinka darbiga qoraxda ee 1000 Lumens
Baabuurka korontada & Baabuurka Golf -ka Gel batteriga super super
SGL07 Taxanaha iftiinka cawska qoraxda 5W
Iftiinka sare G012 iftiinka cawska cadceedda oo leh baalal ...
B008 beerta cadceeda iftiin_9.7V batari lithium
60W hight led hufnaan UFO beerta qoraxda
20W iftiinka beerta qoraxda 2000 lumens
Taxanaha PV3500 oo ka baxsan qalabka korantada ee waxtarka sare
Inverter PV18 VPM 2-3KW ee nidaamka qoraxda yar
Taxanaha PV1800 PRO-450v/240v/110v oo ka baxsan nidaamka qorraxda ...
Taxanaha EP3300 TLV oo ka baxsan beddelka nidaamka qoraxda
Inverter EH9335-80KS oo ka baxsan korantada xoojinta weyn iyo awoodda
Taxanaha EH9335-60KS oo ka baxsan korontada korontada qoraxda
CAW7/11/22KE-DCGS mini AC/DC nidaamka lacag-qaadista baabuurta
1. Alaabta ceyriin ah - birta birta aan lahayn ee heer sare ah iyo rinjiga buufinta. Hubi in iftiinku uusan daxalayn oo aad ka dhigto mid ka sii qurux badan.
2. Xoog -weyntu wax bay dhalisaa, waa ka sii dhalaal.
3. Waqtiga shaqada oo dheer -10-12 saacadood.
4. Lifpo4 dheecaan ka -baxa batteriga iyo wareegyo badan.
Nalalkayaga cawska cadceeda waxaa loo isticmaalaa qaybo badan, way ka xoog iyo heer badan tahay. Marka la barbardhigo badeecadaha kale ee suuqa yaal - waxaan haysannaa jajabyo badan oo hogaamiya, waxaan leenahay batari ka weyn. Gudiga qoraxda ayaa sidoo kale ah nooca ugu fiican 9V ee nalka noocan ah.
Email noo soo dir U soo degso sidii PDF
AntarCS Solar Bollard Aluminium budo ah ayaa lagu daboolay ilaa satin cawlan
• Nalalka cadceedda ee darajada ganacsiga
• Waxay u baahan tahay 10-12 saacadood oo lacag ah kahor isticmaalka
• 10-12 saacadood wax soo saarka iftiinka habeenkii
• Bateriga LiFePO bu oo tayo sare leh
• Naqshad casri ah oo soo jiidasho leh
• Ku habboon iftiiminta waddooyinka iyo socod -socodka
• Dareemaha iftiinka tooska ah wuxuu shidaa oo dejiyaa Laydhka hawlgalka fiidka ilaa waaberiga
• Damaanad -qaad: 1 sano oo dammaanad ah oo ku saabsan shaqayntu qaldan tahay ama qayb ka mid ah oo aan saamayn ku yeelan habab dibadeed
Tilmaamaha Tiirka S0LP0LE010, Darbiga S0LWALL010, Tiirka S0LPILL010, Bollard S0LB010
• Midab Powdercoat satin madow • Guddi Qoraxeed 9V 6watts
Time Waqtiga Lacagta 4-6 saacadood • Cabbirka Guddida Qorraxda 230Hx230Wmm
.CCT 4000K (cad cad) Source Isha Isha 36 LED -yo xoog leh
• Cabbirka Bollard 800H x 275Wmm (sare) ・ Batariga LiFePO^ baytariga
Ness Iftiin Qiyaastii 350 lumen wax soo saar • Qalab Aluminium, polycarbonate diffuser
Waa maxay Lumen? Erayada fudud, Lumens waa cabbir wadarta guud ee iftiinka muuqda ee ka soo baxaya laambad ama ilayska. Heerka sare ee lumen -ka, ayaa 〃b 「ighte「 lamp laambaddu soo muuqan doontaa. Sidee tani u barbar dhigtaa ilaha kale ee iftiinka? Tusaalooyin la yaqaan • Maglite batari unug 4 x D ah oo caadi ah ayaa soo saari doona qiyaastii. 70 Lumen • Celceliska qaabka dariiqa qalabka oo la adeegsanayo 2-3 LEDs wuxuu soo saaraa 15-18 Lumen
Mabda’a shaqaynaya ee iftiinka beerta cadceedda ayaa ah in guddida qorraxdu ay nuugto tamarta qorraxda (tamarta iftiinka) maalintii oo ay tamarta iftiinka u beddesho tamar koronto oo ay ku kaydiso baytari dib loo soo celin karo. Marka midabka maalinta uu madoobaado, iftiinka qoraxda si toos ah ayuu u shidaa oo wuxuu bilaabayaa iftiin, oo midabka maalinta wuxuu bilaabmaa inuu is beddelo subaxdii On, iftiinku si otomaatig ah ayuu damiyaa, oo lacag -bixintu bilaabataa. Waxaa lagu dabaqi karaa duruufaha dalabka sida jardiinooyinka barxadda, meelaha muuqaalka leh, iyo tuulooyinka la deggan yahay.
Tamarta cagaaran, wasakh ma leh;
Looma baahna in la jiido siligga, ammaan ah oo la isku halleyn karo, ku habboon in la dhaqaaqo oo si sahlan loo dhigo;
Saacadaha shaqada oo dheer iyo kharash yar;
Tamarta qorraxda waxaa loo isticmaali karaa 5 ilaa 10 sano, diode-yaasha iftiimiya iftiinka LED ayaa shaqeeya muddo dheer;
Naqshad wareegga waxtarka sare, keydinta tamarta iyo kaydinta lacagta;
Nolosha badeecada dheer
Intaa waxaa dheer, baatariga lithium ee la isku hagaajin karo oo ah bareeraha qoraxda ee la isticmaalo ayaa si weyn u hagaajin kara ururinta iftiinka; way ku habboon tahay in si toos ah loogu rakibo hoosta qorraxda, oo cabbirkiisu yar yahay oo miisaankiisu yar yahay, yaraynaya kharashaadka dhismaha; cimri dherer, kaas oo ah kaydinta tamar-dhaqameedka batteriga-aashitada 3-5 jeer; saamayn yar ku yeelatay heerkulka, gaar ahaan u adkaysta heerkulka sare iyo kan hooseeya; ka sokow, wax-qabadka bilaa dayactirka ayaa wanaagsan.
Naqshadaha Iftiinka Qorraxda
Hore: 2713 taxane iftiin caws qoraxda beerta
Xiga: G001 iftiinka cawska qoraxda 5 sano damaanad
Laambadda Cawska Qorraxda
Laambadaha Cawska Qorraxda
Iftiinka Cawska Qorraxda
SWL-16 (MARS 3) iftiinka darbiga qoraxda oo dib loo soo celin karo ...
Waxtarka sare ee batteriga jel qorraxda
PNG 144P 9BB tayo sare leh unug guddi qoraxda b ...
PV1800 PRO taxane-450v/240v/110v off qoraxda Roobka ...
PNG120M 9BB PV ee nidaamka qoraxda
BASALT SOLAR STREET LIGHT
Cinwaankaaga: Dabaqa 1aad, degmada baoan dakhligeeda shenzhen ee Shiinaha.
Qandaraaska qandaraaska ugu weyn ee kaydinta qoraxda ...
Kooxda Eni ee Talyaaniga waxay la wareegeen Spain ...
Qorshaha cusub ee aasaasiga ah ee tamarta Japan ...
Warshadaha ileyska cadceedda ee qoraxda “ex ...
Rugao wuxuu dib u habeyn ku sameynayaa 4 waddo oo dowladda hoose ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2019-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay.